काठमाडाैं, १३ कात्तिक । महामारीको रूपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध १ सय ५४ वटा खोप विकास भइरहेको छ । यी मध्ये ४४ वटा खोप परीक्षणका लागि मानिसमा प्रयोग गरिएको छ । यसबाहेक इबोलाविरुद्ध प्रयोग हुने रेम्डिसिभर नामक खोप कोरोनाविरुद्धको उपचारमा पनि प्रभावकारी देखिएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणका सुरुका दिनमा नेपालमा १ लाख रुपैयाँसम्म रेम्डिसिभरको खरिदबिक्री भयो तर सरकारले नै यो खोप प्रयोगको अनुमति दिएपछि अहिले एक भाइरलको ६ हजार चार सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक पटक मात्रा पुग्ने गरी राखिएको एक सिसीलाई एक भाइरल भनिन्छ । कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई दुई चरणमा रेमडिसिभर औषधिको थेरापी दिइन्छ ।
जसमा सामान्य अवस्थामा रहेका बिरामीलाई ५ भाइल र अक्सिजनसहितको बिरामीलाई ११ भाइल दिनुपर्ने चितवनको भरतपुरस्थित कोभिड अस्पतालका संयोजक डा. प्रमोद पौडेल बताउनुहुन्छ । नेपालमा रेम्डिसिभर औषधि आयातका लागि भारतका तीनवटा कम्पनीले मान्यता पाएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर तोकिएका औषधि पसल र औषधि उद्योगबाट मात्रै यो औषधि चिकित्सकको सिफारिसमा खरिद बिक्रि गर्न भनेको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा १५ हजार भाइल रेम्डिसिभर आइसकेको छ भने बङ्गलादेशबाट १० र भारतबाट ६ हजार भाइरल आउँदैछ ।
यसैबीच, नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरुलाई रेम्डिसिभर र प्लाज्मा थेरापी पद्धतिबाट संयुक्त रुपमा गरिएको उपचार प्रभावकारी पाईएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अनुसन्धानबाट कोरोना सङ्क्रमितको लागि रेम्डिसिभर र प्लाज्मा थेरापी दुबै बिधिबाट गरिएको उपचार प्रभाबकारी देखिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।